Kedu ka m siri lie Digg (My Fault) | Martech Zone
Maka ndị gị ndị na - agụ blọgụ m oge niile, ịmara na m na - eme nnwale lot ọtụtụ! Ikekwe oke! Na mbido izu a M debanyere aha m maka Ntinye Akaụntụ. Ọ bụ ọrụ na-ahụrụ na na-adịbeghị anya Wired isiokwu ebe onye edemede nke isiokwu ahụ kwụrụ iji nweta Diggs on Digg.com.
Nke a bụ otu o si arụ ọrụ… mmadụ na-akwụ Onye Ntinye Akwụkwọ na ha kewara ego ndị ọrụ Digg, bụ ndị, na-egwupụta akụkọ ahụ. Usoro a bu eziokwu nke igwa gi eziokwu. Na-enweta omenala ndepụta URL nke na-agwa gị akụkọ ndị Digg. Gị mgbe ahụ igwu akụkọ. Ga-abanyeghachi n'ime Ntuziaka Onye Ọrụ iji kọọrọ gị gwg akụkọ. Mgbe nke ahụ gasị, gị igwu 'kwupụtara'. Amaghị m ihe mejupụtara ya, mana ọ naghị akpaghị aka.
Echere m na ndị na-arụ ọrụ na Onye Ọrụ Ntinye akwụkwọ kwesịrị ịkpachara anya banyere otu ha si aga ahịa ha. Ọ bụrụ na ha na-enyocha Digg mgbe niile maka ọdịnaya, ejiri m n'aka na Digg ga-adịrị ha ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ na-enyefe Onye Ọrụ, enwere m ike ịgba akaebe na ha nọ gị ngwa ngwa karịa!
Ọrụ m na User Submitter bụ eze taa. Enwetara m ozi na-esonụ mgbe m nwara ịbanye Digg.com:
Na ihe m nnukwu ego?
Ihere na-eme m ikweta na emere m nnukwu $ 0.50 tupu e jiri lie m Digg. N'ezie, emebeghị m ihe ọ bụla n'ihi na ọ nwere ike ọ nweghị ihe m nwere ike ịnakọta $ 0.50 n'aka Onye Ntinye Akwụkwọ.
Ya mere, gịnị ka m mụtara? Enwere ike Digg emegbu? Chọpụta, ma ha na- ikiri ma melite ikike ha imebi nsogbu ndia. Ndị ọrụ ntinye akwụkwọ na-elekọta? A na m eche na ha nwere ike ị nweta Diggers tụbara aka ekpe na aka nri… wee jiri mint wee pụọ. Mgbe m nyochachara Onye Ọrụ Ntinye, ndụmọdụ m ga - abụ pụọ. Ọ bụ ihe mgbu na butt, igbu oge na-erughị pennies ndị ị nwere ike ma ọ bụ ghara ị nweta.
Karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ Digg. Adịghị m nnukwu ofufe, ma ọ dị m nwute na enwetara m buut.
Ndo Digg! Ndo Kevin, Owen, Nicole, Brian, Steve, Amar, Dan, Daniel, Eli, Jay, John, Mike, Ron, Scott, na Timeless!
Ma eleghị anya, i nwere ike iri ihe azụ gị na na na ọkara a Akon i mere ..
oh chere na inwetaghi ya obula .. nwoke ojoo .. ugbua ihe na ewute gi lol
A ga m eji obi uto kwụọ 50 cents maka ọrụ ebere ọkacha mmasị Digg!